Shiinaha Mechanical Internal Feed Rotary Drum Filter Shaashada soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Holly
Filter Drum (Feed Gudaha) ， kaas oo sidoo kale loo yaqaan shaashadda durbaanka, waxay ku habboon tahay kala-soocidda dareeraha adag ee biyaha wasakhda ah ee warshadaha iyo bulaacada gudaha.Waxay ka saari kartaa qashinka adag ee cabbirkiisu ka badan yahay 0.2mm. dareeruhu wuxuu ka soo galayaa gudaha durbaanka rotary isagoo sii maraya marinka quudinta ka dibna u sii gudbiya weelka qaybinta dusha durbaanka. Qaybaha iyo biyuhu waxay kala soocaan sida durbaanku wareego adkaha joogsanaya shaashadda oo hoos u dhigaya meel bannaan oo durbaanka ah .
1.Maaddadu waa birta aan fiicnayn ee xoogga badan iyo daxalka u adkaysta;Dhulka aan la isticmaalin;Dhismaha ku habboon;Waxaa si toos ah loogu hagaajin karaa boolal ballaarinta iyada oo aan la dhisin kanaalka;Biyaha gudaha iyo dibaddaba waxaa lagu xidhi karaa tuubooyinka.
2.Shaashada laguma xannibi doono qashin adag sababtoo ah mishiinka ayaa leexiyay qaybta trapezoid cross
3.Mashiinka waxaa lagu xakameynayaa matoor-xawaaraha la hagaajin karo, kaas oo ilaalin kara xaaladda shaqada ee ugu fiican iyadoo loo eegayo socodka biyaha.
4.Qalabka dhaqidda gaarka ah wuxuu caday karaa wasakhda dusha sare ee shaashadda, ka dib laba jeer buraash gudaha ah, waxay gaari doontaa saameynta nadiifinta ugu fiican.
Qaabka Cabbirka Shaashada Cabirka Awood Qalab Heerka saarista
Cabbir adag Cabbir adag
Meesha: 0.15-5mm 1500*500*1200mm 0.55KW SS304 0.95 0.55
Meesha: 0.15-5mm 1800*600*1300mm 0.55KW SS304 0.95 0.55
Meesha: 0.15-5mm 1800*700*1300mm 0.75KW SS304 0.95 0.55
Meesha: 0.15-5mm 2400*700*1400mm 0.75KW SS304 0.95 0.55
Meesha: 0.15-5mm 2700*900*1500mm 0.75KW SS304 0.95 0.55
Meesha: 0.15-5mm 2800*1000*1500mm 1.1KW SS304 0.95 0.55
Meesha: 0.15-5mm 3000*1100*1600mm 1.5KW SS304 0.95 0.55
Meesha: 0.15-5mm 3200*1200*1600mm 1.5KW SS304 0.95 0.55
Hore: Shaashada shaandhaynta Durbaanka Rotary ee Tayada Wacan
Xiga: Shaashada shaandhaynta durbaanka Rotary ee Quudinta Dibadda